रुपा सुनार दलित नभएको खुलासा, यस्तो छ सबैलाई झस्काइदिने वास्तविकता ! | Rochak
July 4, 2021 NepstokLeaveaComment on रुपा सुनार दलित नभएको खुलासा, यस्तो छ सबैलाई झस्काइदिने वास्तविकता !
नेपालमा बेलाबेलामा चर्चाम आइरहने बिषय हो दलित र ब्राहम्ण को बिबाद । यतिबेला यहि बिषयले गर्दा सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।
रुपा सुनारका बिषयमा फरकफरक समाचार आइरहेका छन्। उनी करोडौको कारोबारमा सलंग्न भइरहेको समाचार आइरहेका बेलामा समाचार साचो वा झुटो भन्ने ठोस आधार फेला पार्न सकिएको छैन ।
तल्लो जाती र माथील्लो जातको बीचमा भेदभाब गरेकम कानुनबमोजीम कडा का।बाही हुने ब्यबस्था सबिंधानमै उल्लेख छ । नेपालमा कानुनमा उल्लेखित सबै कुरा कार्यान्वयन भएको भए नेपालले फडको मारिसक्ने थियो यसको कल्पनासम्म गर्न सकिदैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रबिधिको बिकास एकदमै न्युन गतिले भइरहेको छ । देशमा जातिय द्धन्द्ध चर्किने खतरा बढेको छ । आधुनिक बिश्वको नियमअनुसार व्यक्तिमा भर पर्दछ परिबर्तन र जात भातका बारेमा नयाँ पुस्ताले प्रसस्तै सिक्ने अवसर पनि पाएका छन् । सबिधानमा पनि स्पष्ट रुपमा देशमा तल्लो समुदाय र माथिल्लो समुदाय समान रहेकाले भेदभाब स्वत सकिने कुरा उल्लेख छ । सबिंधानको परिभाषालाइ गहिरिएर हेर्दा रुपा सुनार न त दलित नै हुन न त बाहुन नै हुन । त्यसकारण रुपा एक मानब हुन ।
दलितहरु र जातब्यबस्था
जात भनेको के हो ? जात सब्द “संस्कृत” को “जातः” बाट आएको हो । जातः को अर्थ हुन्छ “जन्मिने” या जन्म लिने । मान्छे, जनावर, किरा(फतेंग्र जुन योनि मा जन्म लिन्छन त्यसैलाई “जीव” को सरिर धारण गर्ने “जातः (जाती) भनिन्छ । योनिको २ अर्थ हुन्छ १ । महिला को प्रजनन अंग र २ । जीव ले धारण गर्ने सरिर । जातले मानव को लागि मात्र होइन त्यो सबै जीव(जन्तुको रुप लाई दर्शाउने सब्द हो । मान्छे जुन योनि (सरिर) मा जन्म लिन्छ त्यहि रुप लाई जातः.जात भनिन्छ ।
जाती कति वटा हुन्छन् रु जाती मात्र ४ वटा छन् । बुझ्ने कोसीस गर्नुहोला हिमवतखणड, श्रीमदभागवत, स्कंदपुराण,,, मा चारजात प्रष्टसँग छुट्ईयको छ। जस्तै (स् १।जरायुज .जराबाट ऊम्रियका बोटबिरूवाहरु । २।स्वईदज .पसीनाबाट ऊत्पतीहुने ऊडुस उपीयाँ आदी । ३।अण्डज .फुल९अण्डा० बाट जन्मियका पंछीहरू किरा फट्ङ्ग आदि । ४।यौनिक .योनिबाट मैथुन९सेक्स्० गरि जन्मेका जिबजन्तु र मानिस, घोडा, गधा, हात्ती, आदि आदि ।
जाति भने को यहि हो । यो ४ बाहेक अरु कुनै जाति हुन्दैन । सास्त्र९धर्म ग्रन्थ हरु० अनुसार मानव को कुनै जाति छैन । सबै मानव एउटै जाति “मानव जाति” का हुन् । आत्मा लाई सरिर धारण गर्नको लागि यहि ४ वटा माध्यम चाहिंन छ । आत्मा त्यो जीव हो जुन अमर छ ।
आत्मा न महिला हुन्छ, न पुरुष ,न नपुंसक । आत्माले जुन सरिर धारण गर्छ त्यहि अनुसार आफ्नो पहिचान ग्रहण गर्छ । आत्मा यदि पुरुषको सरिर पायो भने त्यो पुरुष हुन्छ । यदि स्त्रीको सरिरमा गयो भने त्यो स्त्री हुन्छ । यदि नपुंसकको सरिरमा गयो भने त्यो नपुंसक हुन्छ । त्यस्तै आत्मा यदि हात्ती, कुकुर, रुख, बिरुवा, किरा, कमिलाको सरिर धारण गर्छ भने त्यो त्यहि पहिचानको साथमा जन्म लिन्छ ।
यहि सबैको जातको कारण हुन्छ । मानव लाई इश्वोर ले सबै भन्दा धेरै महत्व दिएको छ । र मानव लाई इश्वोरले एउटा यस्तो महत्व पूर्ण कुरा दिएको छ जसले गर्दा मानव सबै सरिर धारी जीवहरुमा सबै भन्दा उत्तम छ । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो “बुद्धि” । हाम्रो यहि बुद्धि ले हामीलाई सबै जीवहरु भन्दा भिन्न र महत्व पूर्ण बनाउन छ । हामी मा सोच्ने, सम्झिने, विचार गर्ने र त्यो विचार सहि हो कि गलत त्यसलाई तथ्य पूर्ण तरिका ले बुझी ब्यबहारमा धारण गरेर उत्तम उत्तम कार्य हरु गर्ने छमता मात्र हामी मानवहरुमा छ । त्यसै ले सबै मानव लाई “वेद” ले भन्छस्(
।। मनुरभवस् ।।
अर्थात्ः मानव बन्नु । जनावरको मासु खाएर जनावर न बन्नु । अहंगकर, क्रोध गरेर कहिले दानव न बन्नु । धर्म त्यागेर अधर्म लाई धारण गरेर कहिले मलेक्ष्य९ निच, घटिया, अन्धबिस्वस्सी। अन्यायी, दुराचारी मान्छे० न बन्नु । यो सानो(ठुलो, दलित, बाहुन, मगर, नेवार यो सब जात होइन । यो सब सासन गर्ने, हुने खानेहरुले आफ्नो फाइदाको लागि बनाएको मुर्खता पूर्ण व्यवस्था मात्र हो । धर्म सस्त्र हरु मा यस्तो कुरा लाई जात कहिँ भनिए को छैन । जात जस्तो पवित्र प्रक्रिया लाई यस्तो ध्रिनात्मक कुरासंग जोडेर मानव(मानव मा भेद गराउने मानवहरु नर्क तुल्य छन् ।
मित्र हामीले कर्मको आधारमा बनाइएको वर्ण व्यवस्था लाई न बुझेर त्यसलाई जन्मको आधारसंग जोडी दिएका छौ । त्यसैले आज हाम्रो अबुझ र ज्ञान हिन, अरुको कुरा मा लाग्ने, आफै कहिले पत्ता लगाउने प्रयाश नगर्ने बानिले गर्दा हामीले घरमा कुकुर पल्छौ तर मानव लाई जात(पातको भेद(भाबले गर्दा घर बाहिर फल्चौ । कक हाम्रो यस्तो कार्यले गर्दा हामी आज जनावर भन्दा पनि निच भएका छौ ।
हिन्दु धर्मको कुनै पनि सास्त्र उठाएर हेर्नुस कहिँ पनि भेद(भाब, उच(निच जस्ता कुराहरु भेट्नु हुन्न । भगवान श्री रामचन्द्रले सब्रीको जुठो बैर खाएर मानव लाई यो सिक्क्षा दिएको थिए कि “हेर जब मैले मानव(मानव मा भेद गर्दै न भने तिमिहरुले कसरि गर्न सक्छौ” । श्री कृष्ण ले गितामा भनेका छन् कि ” जुन हावा पानि हामी सबैले ग्रहण गेर्छौ जब त्यो हावा पनिमा भेद भाब छैन भने मानवमा कसरि भेद भाब हुन सक्छ” ।
हिन्दू वर्णव्यवस्था अनुसार तोकिएको पेशागत नाम र तह नै जात हो। सुरुमा चार वर्ण ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्र भनेको पेशागत क्षेत्रको मानव समुह र तहगत व्यवस्था थियो।
त्यसैगरी क्षेत्रीमा पनि झर्रो, घर्ती केही भेद भए पनि धेरै तहगत जात हुँदैनन्। त्यसको एउटै कारण हो कि उनीहरूको ज्ञान र शासनको मूल श्रम क्षेत्र कायम राखियो। वैश्य र शूद्रभित्र मात्रै तहगत आशयका जात किन बनाइयो भन्दा उनीहरूबाट नै सबैथरी श्रमको काम गराइयो।कारण यही नै हो। जात अर्थात् श्रम क्षेत्र वा पेशा। यस प्रकार जातको नाम पनि श्रम वा स्थान विशेषसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् र अहिले पनि प्रचलित जातको नामको चरित्र त्यस्तै कायम नै छ।
जस्तै, कर्मीबाट कामी, दमाह बजाउने दमाहीबाट दमाई, जुम्लाको –कतिपयका भनाइमा हुम्ला० सराक भन्ने स्थानबाट फैलिएका सराकीबाट सार्की, वाद्य अर्थात बाजाको काम गर्ने वाद्येयीबाट बादी, गाउनेबाट गाइने, द्य देउता को मन्दिर सफा गर्ने, रखवारी गर्ने द्यलास चर्म अर्थात् छालाको काम गर्ने चमार आदि आदि।
हिमाली भोटे जातिमा नामसँगै थर भन्ने परम्परा नै थिएन तर अहिले नामसँगै थर भन्ने अरुसँगको अन्तरक्रियाले गर्दा उनीहरूले पनि नामसँगै थर लेख्न थालेका छन्। जनजातिमा र मुस्लिम समुदायमा पनि थरले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेकै छ। त्यसैले नेपालमा रहेका फरक फरक समुदायका निम्ति थरको अर्थ र उपादेयता फरक फरक हुन्छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ।
थरहरू यसप्रकारले निम्नानुसार बनेका छन्ःक० उद्गम स्थानसँग सम्बन्धित जस्तै, दुल्लुबाट हिँडेका दुलाल, पौडीबाट हिडेका पौडेल। ख० पेशासँग सम्बन्धित जस्तै, प्रशासनको काम गर्ने कार्की। ग० पदसँग सम्बन्धित जस्तै, मन्त्री खलक अमात्य।
घ० पद्वीसँग सम्बन्धित जस्तै, दीक्षित गर्ने आचार्य, लामा। ङ० सामाजिक हैसियतको सङ्क्रमणकालसँग सम्बन्धित जस्तै विटुला। च० जाति वा जातसँग सम्बन्धित, सीधै जात नै नाम थरको रूपमा प्रयोग यसभित्र पर्छन्। छ० राष्द्रियतासँग सम्बन्धित जस्तै, भारती, नेपाली। ज० आस्था, मान्यतासँग सम्बन्धित जस्तै शिवभक्ति, खेवा। झ० ऐतिहासिक घटना वा कूलसँग सम्बन्धित जस्तै वर्मशाखा।
नेपालका आर्य–खस, मधेसी र नेवारभित्रका दलितहरूको थर निर्माणको प्रक्रिया र विद्यमान थरहरू पनि अन्य सबै जाति समुदायको जस्तै नै हो। यी तिनै जातिसमुदायभित्रका दलितको थुप्रै थरहरू र ती जाति समुदायभित्रका गैरदलितको थुप्रै थरहरू मिल्छन होइन बरु एउटै हुन्। त्यसैगरी प्रत्येक जातिजातसमुदायमा मात्र पाइने थर भए जस्तै दलितभित्रका विभिन्न जातहरूमा मात्र पाइने थर पनि छन्।